ARCORA Single lever basin igwekota taịlị swivel spout kpochapụrụ nickel - arcorobinet
Welcome / Ime ụlọ ịsa ahụ / ARCORA Single lever bein baser mixer swivel spout leghaara nickel
ARCORA Single lever basin igwekota taịlị swivel spout leghaara nickel
Okwu mmalite nke lavatory fosets:
Matte Black na-adịgide adịgide: Na-egbochi corrosion na nchara na iji ya mgbe niile.
Dị mfe iji wụnye: Nhazi otu oghere maka nrụnye na-enweghị mgbalị.
Dị mfe iji: otu njikwa maka njikwa dị mfe nke mmiri oyi na mmiri ọkụ.
Nke a 1 2320201 na-eji mmiri ịsa ahụ na-arụ ọrụ nwere ọtụtụ uru, ọ na-echekwa mmiri ma nwee ọmarịcha mma, enwere ike ịsị na ọ bụ ndụmọdụ kachasị elu na kichin na ụlọ ịsa ahụ.
Ntucha ma ọ bụ mposi mposi maka 1 oghere echichi; Elu: 11 "; Spout Iru: 7 ”; Ihu Oghere: 1,4 "(Biko nyochaa akụkụ oghere gị tupu ị nye iwu).
Ilelọ Mposi na Igwe ịsa ahụ: Igwe mmiri maka sink ma ọ bụ akwa mmiri, enwere ike iji ya maka ụlọ ịsa ahụ na kichin, aak dị elu na ngbanwe ogo ogo 360 dị mma maka nsị abụọ mgbe ị rụchara ọtụtụ ọrụ.
Ghichaa Nickel Igwe anaghị agba nchara Kitchen Foset: Nwere ike iguzogide ọkọ na nchara ụbọchị, igwe anaghị agba nchara spout na zinc ahu, siri ike na inogide, zuru okè n'ihi na ụlọ, ụlọ ịwụ, kichin, nkwari akụ , ụlọ oriri na ọ restaurantụ ,ụ, ulo, ụlọ mgbazinye, wdg.
Ngwá ọrụ dị mma: ọkpọkọ mmiri tucai na American site na ederede nchekwa, ihe mgbochi mgbochi na mmiri na-enweghị isi n'ime mmiri iji hụ na mmiri dị mma, ihe ntinye niile dị mma igwe anaghị agba nchara, enweghị mmiri ọ bụla ihihi.
KWES WARRUS KWES CoR with KWES withR with KWES CR C KWES :R:: Ekpuchi ya site na ụbọchị 90 anaghị akwụghachi n'efu yana ikike ndụ gị niile!
White na Chrome ụlọ ịsa ahụ fosets
Ime ụlọ ịwụ ahụ nke oge a White na ...
Lavatory foset na chrome ịsa ahụ
Washbasin foset ụlọ ịsa ahụ Washbasin igwekota Bathroom foset Washbasin foset Single menjuobi igwekota, Mara imewe Matte nwa
Washbasin foset ụlọ ịsa ahụ foset Miti ...
Basin foset Single emefu Single emefu ụlọ ịsa ahụ igwekota Kpatụ tụọ foset Bathroom foset Chrome
Washbasin foset otu menjuobi igwekota mgbata ...